Kwimbali yentliziyo ye-Isernia Lodging Maison - I-Airbnb
Kwimbali yentliziyo ye-Isernia Lodging Maison
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguGaia
Kumbindi wembali we-Isernia, phakathi kweCathedral kunye neFraternal Fountain, le ndlu ikwisakhiwo esiyimbali esiluhlobo olulodwa. Ayikude kakhulu kwaye ifikeleleka ngokulula ngeenyawo kwiindawo zokundwendwela zesixeko kodwa nakwiBhotwe lezoBulungisa, isikhululo sebhasi kunye nesikhululo sikaloliwe.
Ifumaneka kumgangatho wesibini wesakhiwo sobunini obukhethekileyo, indlu ikhanya kakhulu, nangona ikwiziko lembali. Ukusuka kwi-balcony, ejongene nesitrato esikhulu sesixeko sakudala, kunokwenzeka ukuba ubone inqaba yentsimbi yeCathedral. Iindwendwe zinendlu yonke ezifumanekayo: umnyango omkhulu okhokelela kumagumbi okulala amabini kunye negumbi lokuhlala; ikhitshi enkulu yokutya; amagumbi okuhlambela amabini 1 aneshawari, 1 enebhafu. Ngaphandle kwekhitshi kunye namagumbi okuhlambela, umgangatho we-parquet.
Indawo yokuhlala ibekwe kwisitrato esikhulu seCentro Antico. Amanyathelo ambalwa ukusuka apha:
- emazantsi, iPiazza X Settembre kunye neCathedral yaseIsernia;
- ukuya emantla, iPiazza San Pietro Celestino kunye nendlela eya kwindawo entsha yesixeko
Iziko lembali lesixeko likwayindawo yokutsala abakhenkethi. Apha uya kufumana ezona ndawo zokutyela zibalaseleyo kunye neendawo eziqhelekileyo zokungcamla ezona zidlo zemveli zibalaseleyo okanye ufunde malunga nokuvela kwazo. Inkunzi yokuqala ye-Italic League, i-Isernia (kodwa kunye nommandla wephondo) ityebile kwimbali: ukusuka kwindawo eyaziwayo ye-archaeological ye-Homo Aeserniensis (malunga nesigidi seminyaka eyadlulayo) ukuya kwi-Samnite efunyenweyo 'yakutshanje' yexesha eligcinwe eSanta. Maria Museum delle Monache, kwi ziko lembali. Kude kufuphi nendlu kukho iMyuziyam yeCivic yeMemori kunye neMbali, ehlelwe ngamacandelo amathathu anikezelwe kwiibhombu eziye zabandezeleka ngexesha leMfazwe Yehlabathi yesiBini, kwi-lace emangalisayo ye-bobbin - ibhongo lesixeko - kwaye ekugqibeleni kuPope Celestino V, inzalelwane Isernia.. Ethetha ngokuzalwa okuzukileyo, uPontiyo Pilato wayekwayi-Isernino: ilitye lesikhumbuzo lentsapho yakwaPontia lalisetyenziswa njengesiseko soMthombo woBuzalwane obumangalisayo yaye lisabonakala apho.
IMyuziyam yaseCivic ikwabalisa ngeMbasa yeGolide yeValor yaseMkhosini eyanikwa igorha lase-Isernino, uTullio Tedeschi, owatshonisa inqanawa yaseNgilani yaseYork ngexesha lobugorha bemishini eSuda Bay ngexesha leMfazwe yesibini yeHlabathi. Ezinye izinto ezimangalisayo yi-Isernia reserve kunye nephondo layo. Ndishiya kuwe ukufunyanwa kobuhle bendalo.
Umbuki zindwendwe ngu- Gaia
Umamkeli unokuqhagamshelwa ngefowuni, iSMS okanye iWhatsapp kuzo zonke iimfuno